सावधान ! कण्डम नलगाई सेक्स गर्ने बानी छ ? गम्भिर रोगका बारेमा सार्वजनिक भयो यस्तो तथ्य – Etajakhabar
सावधान ! कण्डम नलगाई सेक्स गर्ने बानी छ ? गम्भिर रोगका बारेमा सार्वजनिक भयो यस्तो तथ्य
काठमाडौँ । नेपालमा असुरक्षित यौन सम्पर्कका करिब ८५ प्रतिशत एचआइभी सङ्क्रमण जोखिम रहेको छ । विश्व एड्स दिवसको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रले आज आयोजना गरेको पत्रकारसम्मलेनमा बाँकी सङ्क्रमण सुईद्वारा लागुपदार्थ प्रयोग गर्ने, यौनकर्मी पुरुष समलिङ्गी तथा तेस्रोलिङ्गी, रोजगारीका लागि विदेसिने र जेलका कैदी सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा रहेको केन्द्रका निर्देशक डा पौडेलले बताउनुभयो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर १४, २०७३ समय: २०:२७:२४